ဒီးကူကို ကောက်ညှင်း ခပ်သွယ်သွယ်သုံးခုကို တစ်စုတည်းချည်၍ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကရင်နီအနွယ်ဝင် လူမျိုးစုများ ပေါင်းစည်းခြင်းကို ဖော်ညွှန်းသကဲ့သို့ ကရင်နီအမျိုးသားတို့ရဲ့ လက္ခာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စင်ပေါ်ကနေ ကေးဘျာစယ်ကနေပြီး အလှူခံထားလို့ ရလာတဲ့ ဆန်စပါးတွေကို ကျဲချပါတော့တယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ ရွာသူ/သားတွေက ကျဲချတဲ့ ဆန်စပါးတွေကို ရအောင် စောင်၊ ဦးထုပ်၊ ထီး စတာတွေနဲ့ အလုအယက်ခံယူကြပါတယ်။
ဆိုတရှား (သို့မဟုတ်) မိဘထက် လေးမြတ်တဲ့ သခင်
“ဆိုတရှား” လို့ ဆိုလိုက်ရင် ကရင်နီပြည် သံလွင်အရှေ့ဘက်ကမ်းက ကရင်နီလူမျိုးတွေ မသိသူ၊ မကြားဖူးသူ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ ဆိုတရှားဟာ ကရင်နီပြည် သံလွင်အရှေ့ဘက်ကမ်းက အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေပေါင်း သုံးထောင်ကျော်ရှိတဲ့ တောင်ဟာ ဆင်ပုံသဏ္ဌကဲ့သို့ ထင်ရှားတဲ့အတွက် ဒေသခံတို့က ဆိုတရှားကို “ဆင်တောင်” လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားကြတာပါ။
ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး ကရင်နီအချင်းချင်း သွေးမကွဲကြဖို့…
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ကရင်နီပြည် တပ်မတော် ဗိုလ် နိုနိုဦးဆောင်တဲ့ ပြောက်ကျား တပ်ဖွဲ့မှ ဆရာတော် တျေးဖဲကားကို မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) သတင်းဝက်ဆိုက်မှာ တင်ပြထားတာကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတင်းဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာထက် ပေးထားတဲ့ ဝေဖန်ချက် (ကော်မက်) တွေကို ဖတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်နေမိတာကိုက ပိုဆိုးလှပါတယ်။
ကယားတို့၏ လက်ထပ်ပွဲ ခိုးမဲကာခရိုး
ကရင်နီ မျိုးနွယ်စုထဲမှ ကယားမျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ အချိန်ခါတွင် သတို့သားနှင့် သူ၏အဖော်များက သတို့သမီးအိမ်သို့ သွားရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
အမှန်တရားတွေ ဖုံးကွယ်နေသေးသရွေ့ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမည်
၂၀၀၄ ခုနှစ်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်) (ကေတီ) ဆိုတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ချိန်က နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ကရင်နီ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ဖို့ A4 ဆိုဒ် စာရွက် လေးငါးရွက်ကို ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ရုံးချုပ်မှာ တောင်းယူပြီး ထုတ်ခဲ့ရတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဆက်ဆံရေးရုံးအား မေလ ၃၁ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် ကယားပြည်နယ်အစိုးရမှ ဒုတိယအကြိမ် စာ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် ရွှေ့ပြောင်းပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောခွင့်ရရှိသူက ဆိုသည်။
Posted by ktimes at 11:30 PM No comments:
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ဖမ်းယူကြည့်ရှု့သည့် အောက်စက်များ လွိုင်ကော်မြို့နှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့သို့ အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေး
MRTVရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းရှိသည့် အောက်စက်အလုံးရေ နှစ်ထောင်ခန့်ကို ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်နှင့် လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်း လုံးရေ နှစ်ထောင်ခန့်ကို ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခမဲ့ ဖြန်ဝေပေးလျက်ရှိကြောင်း ဒီးမော့ဆိုမြို့ရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးစိုးနိုင်က ပြောသည်။
Posted by ktimes at 11:25 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဟွေပူကဲရွာ အလည်ရောက်တုန်း ရိုက်ထားတဲ့ ပုံအချို့ပါ။
နမ့်ပန်ချောင်းတဖက်ကမ်းကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ရွာလေး (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
Posted by ktimes at 1:09 AM No comments:
စားသုံးဆီ အမှတ်တံဆိပ်များ အလွဲသုံးစားမှုရှိနေ
ကယား(ကရင်နီ)လွိုင်ကော်မြို့ သီရိမင်္ဂလာ ( တောင်ဈေး ) တွင် စားသုံးဆီများ ရောင်းချသည့် ဈေးကွက်ထဲ၌ စားဆီထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္မဏီအမှတ်တံဆိပ်များ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားကြသည်ကို တွေ့နေရသည်ဟု လွိုင်ကော်မြို့မှ ၎င်းစားဆီကို ဝယ်ယူသုံးစွဲမိသူ ဒေသခံ အမျိုးသား လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
Posted by ktimes at 12:32 AM No comments:
စည်းစနစ်ကျသော အမှိုက်သိမ်းစနစ် ဒီးမောဆိုမြို့တွင်း ပြုလုပ်ရန်ရှိ
အမှိုက်ကားများဖြင့် စနစ်တကျ လိုက်လံပြီး အမှိုက်စုသိမ်းမည့် စနစ်ကို မကြာမီ ဒီမောဆိုမြို့အတွင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်စိုး က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်) သို့ဆိုသည်။
Posted by ktimes at 11:40 PM No comments:
ဆိုလျားကူးရွာသားများမှ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲကို ပြန်လည် ဆင်နွှဲကြ
ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်း ယာမြေသိမ်းခံရသော ဆိုလျားကူးရွာမှ တောင်သူများ က ၎င်းတို့၏ ရွေ့ဆိုင်းခံရသော ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲရေးအစီစဉ်ကို ယမန်နေ့ (၂၇ ရက် မေလ) နံနက် မှာ ပြန်လည် ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြသည်။
Posted by ktimes at 11:32 PM No comments:
ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကယန်းအမျိုးသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနေ့ရွှေရတုပွဲကျင်းပမည်
ကယန်းအမျိုးသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနေ့ နှစ် (၅၀) ပြည့်ရွှေရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကို လာမည့် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ် ဆီးဘူး ကျေးရွာရှိ ကယန်းပြည်သစ် ဌာနချုပ်တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by ktimes at 1:15 PM No comments:
ကရင်နီ အမိမြေ ဓါတ်ပုံများ ဘလော့ဂ်သို့
Blog Archive June (2) May (8) August (3) July (8) January (2) November (2) October (2) September (2) August (5) July (11) June (5) May (18) March (12) February (51)
Kantarawaddy Times. Powered by Blogger.
Copyright © 2011 Kantarawaddy Times | Powered by Blogger